“Kophaa keenya hidhamnee jirra, guyyaas galgalas nutti cufamee turra" - Baqqalaa Garbaa - BBC News Afaan Oromoo
“Kophaa keenya hidhamnee jirra, guyyaas galgalas nutti cufamee turra" - Baqqalaa Garbaa
2 Fuulbaana 2020
Galmee qorannoo duraa Obbo Jawaar Mahaammadfaa irratti abbaan alangaa ragaalee namootaa 15 dhaggeesifachuuf karoorfatee kan ture yemmuu ta’u isaan keessaa afur jechasaanii akka hin kennine har’a beeksiseera.
Oolmaa galmee qorannoo duraa Obbo Jawaar Mahaammadfaatiin har’a abbaan alangaa ragaalee lama kan dhageesifate yemmuu ta’u ragaan guyyaa kaleessaa jechasaanii kennan tokkos gaafii qaxxaamuraa gaafatamaniiru.
Xummura dhaddachaa har’aa irratti abbaan alangaa ragaaleesaa lama bilbilaan argachuu waan hin dandeenyeef qaamaan barbaadee guyyaa Jimaataatti dhiyeessuf beellamni akka kennamuuf gaafateera.
Ragooliin lamaan kun lakkoofsa 11ffaa fi 14ffaa irratti kan argaman yemmuu ta’u lachuu eenyummaan isaanii dhokfamee golgaa/magaarajaa duuba ta’un ragaa kan bahan akka ta’e abbaan alangaa himeera.
Abbaan alangaa hanga ammaatti ragaalee sagal kan dhageesifate yoo ta'u, “ragaaleekoo afur sababa garaagaraatin dhaggesifachuu dhiisera” jechuun mana murtichaatti himeera.
Iyyannoo Obbo Baqqalaa Garbaa
Obbo Baqqalaa Garbaa isaan fi Obbo Jawaar kophaa hidhamuun mirgi namoomaa isaanii sarbamaa akka jiru fi manni murtichaas dhimmicharratti ajaja akka kennuuf gaafataniiru.
“Kophaa keenya hidhamnee jirra. Guyyaas galgalas nutti cufamee turra. Namoota walin akka wal hin agarree taasifamaa jira. Mana fincaanii yeroo deemnulle iddoon itti turru ni cufama” jechuun himan.
Kana malees konkolaataan isaanii yeroo isaan to’annoo jala oolanitti qabame hanga ammaatti akka hin gadhiifamne himan.
'Nagaa fi tasgabbiin biyya kana keessatti akka jiraatuf hojjenneerra'
Dhaddachi dhimma Jawaarfaa ilaalu guyyaa guutuu akka ta'u jedhame
Dhimma ugguramuu herreega baankii ilaalchisee lakkoofsi herreega baankii isaanii, kan haadha warraa isaanii, kan ijoollee fi firoota isaanii ugguramuu isaatin maatin isaanii rakkoof saaxilamanii akka jiranis Obbo Baqqalaan dubbataniiru.
Abukaatoowwan isaanis lakkoofsa galmee herreegni baankii shakkamtootaa fi maatii isaanii ittin uggurame barbaadanii argachuu waan hin dandeenyeef abbaan alangaa odeeffannoo akka isaanif kennu gaafatanii akka turan himan.
Abbaan alangaa lakkoofsa galmee herreegni baankii shakkamtootaa ittin uggurame abukaatoowwaniif kennuu isaa dhaddachi har’aa erga xummuramee booda abukaatoon Obbo Jawaar Mahaammadfaa BBC'tti himaniiru.
Gama biraatin abbaan alangaa haalli qabiinsaa Obbo Baqqalaa Garbaafaa kanaan dura Komishinii Mirgoota Namoomaan daawwatamuu isaa himaniiru.
Manni murtichaa iyyannoo shakkamtootaa qoratee ajaja kennuu fi ragaalee abbaa alangaa hafan lamaan dhaggeeffachuuf Hagayya 29 bara 2012tti beellama qabateera.
Hamzaa Booranaa: 'Nagaa fi tasgabbiin biyya kana keessatti akka jiraatuf hojjenneerra'
Galmee qorannoo duraa Obbo Jawaar Mahaammad fa'i irratti ragaaleen abbaa alangaa dhaggeeffatamuu kan itti fufe yoo ta'u, Hamzaa Booranaan miidiyaaleen duula natti banani jechuun mana murtiitti dubbate.